Rihanna နဲ့ Drake တို့ တှဲခုတျနကွေပွီလား ? ? ? – SoShwe
Home/Entertainment/Rihanna နဲ့ Drake တို့ တှဲခုတျနကွေပွီလား ? ? ?
Rihanna နဲ့ Drake တို့ တှဲခုတျနကွေပွီလား ? ? ?
So Shwe May 27, 2020	Entertainment Leaveacomment
နာမညျကြျောနှဈဦးဖွဈသညျ့ Rihanna နဲ့ Drake တို့နှဈဦးသညျ DJ Spade ရဲ့ အငျစတာဂရမျ Live Story အောကျ၌ တဈဦးနဲ့တဈဦး အပွနျအလှနျစနောကျကာ ကွညျနူးစရာအခိုကျအတနျ့မြားကို ဖနျတီးခဲ့ကွကွောငျး သိရှိရပါတယျ။ ပရိသတျမြားကလညျး သူတို့နှဈယောကျရဲ့ အပွနျအလှနျစကားမြားကို Screenshot ရိုကျကာ ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါ၌ ပွနျလညျဖွနျ့ဝခေဲ့ကွပါတယျ။
သူတို့နှဈဦးလုံးသညျ လကျရှိအခြိနျ၌ တရားဝငျတှဲခုတျနသေူမြားမရှိခွငျးကွောငျ့လညျး ပရိသတျမြားအတှကျ အခဈြဇာတျလမျးတဈခု ပုံဖျောရနျ ကုနျကွမျးရရှိသှားပွီဟုလညျးဆိုနိုငျပါတယျ။ Rihanna သညျ ပွီးခဲ့သညျ့ ဇနျနဝါရီလအစောပိုငျးက ဆျောဒီဘီလြံနာတဈဦးဖွဈသူ Hassan Jameel နဲ့ လမျးခှဲခဲ့ပွီးနောကျ လကျရှိအခြိနျအထိ Single အဖွဈသာ နထေိုငျပါတယျ။ Rihanna နဲ့ Drake တို့နှဈဦးသညျ ပွီးခဲ့သညျ့ (၂၀၀၉) ခုနှဈက ခတ်ေတခဏတှဲခုတျသညျဟု သတငျးမြားထှကျပျေါခဲ့ပွီး လကျရှိအခြိနျ၌ သူငယျခငျြးကောငျးမြားကဲ့သို့ ရငျးနှီးသညျ့ ဆကျဆံရေးရှိနသေလို ပွီးခဲ့သညျ့အောကျတိုဘာလက ကငျြးပခဲ့သညျ့ Drake ရဲ့မှေးနပေ့ါတီတဈခု၌လညျး နာရီပေါငျးမြားစှာ အတူတကှအခြိနျကုနျဆုံးခဲ့ကွပါသေးတယျ။
Drake isaman of the people 😂 The two were clowning each other on @spademuzik’s IG Live yesterday. (via @complexmusic)
A post shared by COMPLEX (@complex) on Mar 25, 2020 at 12:48pm PDT
ထိုကဲ့သို့ အခြိနျကွာမွငျ့စှာအတူရှိခဲ့ခွငျးက သူတို့နှဈဦးကွား ဆကျဆံရေး ပွနျလညျအဆငျပွလောသညျ့ လက်ခဏာဖွဈသညျဟု နီးစပျသူတဈဦးကဆိုခဲ့ပွီး လကျရှိအခြိနျ၌လညျး Rihanna နဲ့ Drake တို့နှဈဦး ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါ၌ လူသိရှငျကွား စနောကျကြီစယျနခွေငျးကွောငျ့ သူတို့နှဈဦးပွနျလညျပေါငျးထုပျရနျ မြှျောလငျ့နသေညျ့ပရိသတျမြားလညျးရှိလာခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။
Rihanna နဲ့ Drake တို့ တွဲခုတ်နေကြပြီလား ? ? ?
နာမည်ကျော်နှစ်ဦးဖြစ်သည့် Rihanna နဲ့ Drake တို့နှစ်ဦးသည် DJ Spade ရဲ့ အင်စတာဂရမ် Live Story အောက်၌ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန်စနောက်ကာ ကြည်နူးစရာအခိုက်အတန့်များကို ဖန်တီးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ပရိသတ်များကလည်း သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အပြန်အလှန်စကားများကို Screenshot ရိုက်ကာ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်၌ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးလုံးသည် လက်ရှိအချိန်၌ တရားဝင်တွဲခုတ်နေသူများမရှိခြင်းကြောင့်လည်း ပရိသတ်များအတွက် အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခု ပုံဖော်ရန် ကုန်ကြမ်းရရှိသွားပြီဟုလည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ Rihanna သည် ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းက ဆော်ဒီဘီလျံနာတစ်ဦးဖြစ်သူ Hassan Jameel နဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ပြီးနောက် လက်ရှိအချိန်အထိ Single အဖြစ်သာ နေထိုင်ပါတယ်။ Rihanna နဲ့ Drake တို့နှစ်ဦးသည် ပြီးခဲ့သည့် (၂၀၀၉) ခုနှစ်က ခေတ္တခဏတွဲခုတ်သည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်၌ သူငယ်ချင်းကောင်းများကဲ့သို့ ရင်းနှီးသည့် ဆက်ဆံရေးရှိနေသလို ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလက ကျင်းပခဲ့သည့် Drake ရဲ့မွေးနေ့ပါတီတစ်ခု၌လည်း နာရီပေါင်းများစွာ အတူတကွအချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ထိုကဲ့သို့ အချိန်ကြာမြင့်စွာအတူရှိခဲ့ခြင်းက သူတို့နှစ်ဦးကြား ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်အဆင်ပြေလာသည့် လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟု နီးစပ်သူတစ်ဦးကဆိုခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်၌လည်း Rihanna နဲ့ Drake တို့နှစ်ဦး ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်၌ လူသိရှင်ကြား စနောက်ကျီစယ်နေခြင်းကြောင့် သူတို့နှစ်ဦးပြန်လည်ပေါင်းထုပ်ရန် မျှော်လင့်နေသည့်ပရိသတ်များလည်းရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Previous ဝတ်ထုစာအုပျမြားကို အခွခေံရိုကျကူးထားသော ဇာတျကားအမြားအပွားထှကျရှိလာမညျ့ (၂၀၂၀) ခုနှဈ။
Next ၂၀၂၀ ခုနှဈရဲ့ အကြျောကွားဆုံး ဟောလီဝုဒျစုံတှဲမြား။